Indlela yokwakha isicwangciso somxholo esiphumeleleyo njengoBrian Dean, umdali we-Backlinko SEO?
Ngokwe-injini yokucwangcisa injini ilawula yonke imithombo yewebhu, ngokukodwa ngokuqhotyoshelweyo kumxholo, kufuneka uvelise umxholo rhoqo. Nangona kunjalo, yintoni umgangatho osemgangathweni wokupapashwa kokuqukethwe? Enyanisweni, akukho ncamango enjengomgangatho oqhelekileyo okanye oqhelekileyo kuba yonke into incike kwi-site yakho ye-niche, iinjongo zoshishino lwakho, kunye nabaphulaphuli bakho abajoliswe kuyo. Ewe, kuya kuba kuhle kuwe ukuba ushicilele okuqukethwe nantoni na unento yokwabelana ngayo noluntu. Nangona kunjalo, kufuneka ulungele ukuba kulo mxholo umxholo wakho awuyi kuxabiswa kakhulu kwaye ngokukhawuleza uyaphela.
Kule nqaku ndiza kubelana nawe ngeengcinga zam kwesi sihloko kwaye ndibonise ukuba kutheni "isicwangciso esinqununu" sesiqulatho siphumelelo lakho.
Unokufumana amaninzi amanqweno kunye nezabelo, fumana amanxeba angenayo kwaye ukhangele ezinye iindlela ezijoliswe kuyo ekusebenziseni "indlela encinci". UBrian Dean, umninimzi we-Backlinko SEO ithuluzi, usebenze isicwangciso sakhe somxholo ukuba siphumelele. Upapashe inani elincinci lezithuba ze-SEO kwiminyaka embalwa edlulileyo. Zonke ezi zithuba ziqhutywe ngeendlela ezininzi ezijoliswe kwiziko lakhe kwaye zenze enye yemithombo yewebhu ebhaliweyo kwiwebhu. Ezinye zezithuba zakhe zafanelwe izabelo eziyi-3 kunye namanqaku angaphezu kwamakhulu amabini anxulumene nemithombo evela kumthombo ochaphazelekayo. Ngoko, njengoko ubona, umnini-titshala we-Backlinko SEO uphumelele ngokuphumelelayo "indlela encinci".
. Udinga ukubandakanya abasebenzisi ngalolu hlobo lomxholo kwaye ugcine ingqalelo kuze kube yile ncwadi elandelayo. Iyakwenza ukwazi ukwakha abaphulaphuli ngokubonisa ubungcali bakho kunye nodumo.
Esi sicwangciso sesicatshulwa esilula, kodwa sokudala sidinga:
Umgangatho ophezulu, umxholo okhethekileyo ophando olwenziwa kwizifundo zecala;
Umxholo opheleleyo kuquka ulwaphulo;
Iifom zexesha elide;
Izicatshulwa ezisekelwe kuphando;
Ugxininiso oluqinileyo ekukhuliseni nasekukhuthazweni.
"Isicwangciso esingaphantsi" sicwangcise ngokufanelekileyo abo babantu be-webmasters abagxininisa kumgangatho womxholo abashicilelayo kunokuba ubuninzi. Ukuphanda nokudala umxholo ophezulu xa inyanga ingathatha ixesha kunye nemizamo kunokushicilela izithuba eziliqela ngeveki.
Le ndlela ayifanele yonke imithombo yewebhu. Ngokomzekelo, akunangqiqo ukusebenzisa izinto zokuzonwabisa okanye iiblogs zemfundo okanye imidiya yoluntu njengoko ezi ziqulatho zifuna iimpapasho ezininzi.
Njengoko ndikhankanywe ngaphambi komzekelo omhle weqhinga lokuqulathwe "ngaphantsi nangaphezulu" ngu-Brian Dean iincwadi kwi-website ye-Backlinko SEO. Uvelisa iimpawu zakhe ezijoliswe kuphando kwaye zichazwe rhoqo kwiiveki ezi-4 okanye njalo. Nangona kunjalo, nangona okushicilelwe kokungapheliyo, abasebenzisi banomdla kwizinto zakhe ezintsha.
Izibalo zibonisa ukuba indlela yokupapashwa kweBrian Dean ibangela ukuba izabelo eziqhelekileyo kunye neemfuno eziphakathi kwazo zonke izithuba ezingama-53 ziphezulu kakhulu. Umyinge wenani lezabelo ngu-2,490, kwaye umlambo u-1,280. Umyinge wenani leemimandla ezidibeneyo ezixhamlayo ziyamangalisa - 275 ngeposi kunye ne-175 ngomlingane. Zonke izikhundla zakhe ezinxinkqileyo ziye zaheha abantu abayizigidi ezi-4 kunye nababukeli bephepha ezili-11. Ibonisa ukuba indlela ehlakaniphile yokwenza umkhankaso wokuthengisa ingashintsha ngokukhawuleza amashrikhi ewebhusayithi kwaye iphakamise igunya lewebhu kwiimakethe zedijithali Source .